Oge ikpeazụ Oasis Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
OASIS Legend mbanye anataghị ikike
Nweta ohere niile kacha mma Oasis Hacks ebe a na Gamepron! Anyị na-enye Oasis Aimbot, ESP / Wall Hack, NoRecoil, na ọtụtụ ndị ọzọ! Imeri ọzọ na ngwaọrụ dị ebe a.
Biko rụba ama: Tupu ịzụta ngwa ahịa Oasis anyị, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi Oasis Hacks
Oasis Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & Ọzọ
ịzụta Oasis Hacks na 4 nzọụkwụ
Buru egwuregwu ịchọrọ ịzụrụ hacks maka nhọrọ aha anyị sara mbara
Họrọ mbanye anataghị ikike nke dabara gị mkpa n'ụzọ zuru oke, ebe anyị nwere ọtụtụ ndị dị iche iche iji tụlee
Mee ugwo gi site na iji ihe nnweta anyi (ma nwekwaa nchebe!) Nhazi ugwo site na Gamepron.
Nweta ohere gị Key & Download Oasis Hacks!
Nweta ohere ịnweta igodo ngwaahịa gị ma budata usoro ịkwesịrị ịchịkwa asọmpi ahụ!
Gịnị mere eji eji Gamepron Oasis Hacks?
Egwuregwu ịlanahụ pụtara iji nwalee ike gị na ike gị, na Oasis ikpeazụ abụghị ihe dị iche. Iji Oasis Hacks anyị ga - eme ka usoro ndụ dị mfe, mana kedu? E nwere ọtụtụ ihe egwu ị ga - echegbu onwe gị mgbe ị na - egwu egwu, yana ma ị ga - aga naanị gị ma ọ bụ jiri di na nwunye ole na ole, nsogbu ga - abịa na nsogbu ị ga - abịa ngwa ngwa. Na PvP (Player na Player) ịbụ akụkụ dị mkpa nke egwuregwu a, ị ga-achọ uru mgbe ọ bụla enwere ike. Mgbe ị hụrụ ndị egwuregwu ‘na-amị mma agha’ ruo ọtụtụ ọnwa, ọ dị gị ka ị nweghị olile anya. Mgbe ndị egwuregwu na-enweghị olile anya mepere Oasis Ikpeazụ, ha na-enweta mmetụta dị egwu nke enwere ike imeri site na iji Oasis Hacks anyị! Anyị nwere ike inyere gị aka ịnweta ohere kacha mma Oasis Hacks dị na ahịa, ihe ị ga - eme bụ ịzụta igodo ngwaahịa na Gamepron.
Anyị agaghị agbada ọdịnala ọdịnala nke ọtụtụ ndị mmepe mmepe ndị ọzọ dabara na. Naanị ha chọrọ ịmịpụta ngwa ngwa ngwa ngwa o kwere mee, gbanwee uru na usoro a - Gamepron lekwasịrị anya na ịmepụta ngwaọrụ adịchaghị mma nke ga-anwale oge. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma na ejiri ego gị eme ihe n’ebe kwesịrị ekwesị, ịzụrụ hacks gị niile ebe a na Gamepron ga-eme ka uche gị dịrị n’udo.
Nwetụla mgbe ị na-eji ngwá ọrụ n'efu na oge gara aga maka Oasis Ikpeazụ? Ọbụlagodi na ọ bụ maka egwuregwu ọzọ, akụrụngwa anaghị akwụ ụgwọ maka ike a na Gamepron. All nke atụmatụ na anyị na-gụnyere n'ime anyị Oasis Hack e mere iji na-emeri mfe, n'agbanyeghị otú nkà na ị bụ dị ka a ọkpụkpọ. A toddler nwere ike ịnọdụ n'ihu kọmputa gị na anyị Oasis Hacks nyeere na-eme ụfọdụ mmebi, anyị na-ekwe nkwa! Nke ahụ bụ naanị ọgbụgba maka otu ngwa ọrụ anyị mepụtara nwere ike isi dị ike.
Ugbu a ị ghọtara àgwà anyị nwere inye, gịnị ka ị na-eche? Keyzụta igodo ngwaahịa taa ma nweta ohere na enweghị mgbagha kachasị mma Oasis na weebụ! Anyị dị njikere ijere onye ọ bụla chọrọ enyemaka aka, ọbụlagodi ma ị na-achọ mbanye anataghị ikike maka oge mbụ. Enweghị ịkpa ókè na-aga ebe a, ebe anyị nwere ike inyere ndị na-egwu egwuregwu ọ bụla aka - mgbe ọ dị gị ka ọ bụ oge ịkpọ maka enyemaka, cheta na Gamepron bụ nhọrọ # 1 n'ịntanetị.
Mbanye anataghị ikike Oasis Wall (ESP)
Oasis Player ozi ESP (Aha, Ogwe ahụike, anya)
Oasis Ihe ESP na nzacha
Oasis mkpuchi ịdọ aka ná ntị onye iro
Oasis super jump mode (enweghị ọdịda mbibi mgbe arụ ọrụ).
Oasis ọkpụkpụ & nzube isi configurable.
Oasis Retil compensator
Ezigbo Oasis Hack atụmatụ
Jiri Oasis Player ESP anyị iji nweta oke uru n'oge ọgụ PvP, ebe ị na-aga ahụ ụdị ndị iro site na ntọala siri ike / enweghị ike
Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike ihu ụdị ọkpụkpọ site na mgbidi, mana ị nwekwara ike ịhụ ozi bara uru (dịka aha ha, ahụike, na ọbụnadị anya).
Na egwuregwu lanarị dị ka Oasis looting dị mkpa, nke mere na iji Nkebi ESP na nzacha iji chọta ihe dị mma dị mma.
Ebumnuche gị ga-adị egwu dị ka mgbe ị họọrọ iji Oasis Aimbot! A ga-eji ngwa ngwa merie egbe egbe.
Oasis Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti etiti)
Zuru okè maka ma mkpụmkpụ ma n'etiti, ị nwere ike iji Oasis Bullet Track atụmatụ iji soro egwu nke gbaa gị.
Ihe ịdọ aka na ntị ga - eme ka ị mata mgbe onye iro dị nso ma ọ bụ zube gị iji ozi ihu igwe.
Oasis super jump mode (enweghị ọdịda mbibi mgbe arụ ọrụ)
Anwụ site na mmebi ọdịda bụ ihe gara aga mgbe ị na-eji Gamepron. Kwado Ọnọdụ Super ma gbaa ọsọ, ebe ọ bụ na mbibi ọdịda adịkwaghị.
Oasis ọkpụkpụ & nzube isi configurable
Oasis Aimbot nwere nhọrọ enwere ike hazie ya, dị ka Ọkpụkpụ Prioritization na ọtụtụ ndị ọzọ.
Oasis aimbot anya ndenye ego
Iji Oasis Aimbot anyị ga-enye gị ohere iji Visible Checks ọrụ chọpụta ebe gbaa gị na-akụ onye iro ahụ.
Jiri Recoil Compensator dị na Oasis Hack anyị iji zere iwe iwe nke iweghachi n'oge ọgụ egbe gị.
Bụrụ onye ọkpụkpọ egwuregwu kachasị mma nke Oasis na mbara ala
Ọ na-ewe ụdị egwuregwu dị iche iche ịbịakwute Oasis na-enweghị ngwaọrụ ọ bụla, ebe ọ ga-abụ ọnya na-akụda mmụọ nke ndị na-eru uju na ndị na-agagharị agabiga ozugbo. Ma ị chọrọ ịbụ troll ma ọ bụ nyefee ụfọdụ ikpe ziri ezi ọsọ bụ kpamkpam ruo player, ma dị nnọọ mara Gamepron nwere niile nke Oasis Hacks mkpa ka i mee ma. Bụrụ onye ọkpụkpọ egwu Oasis kachasị mma mgbe anyị nwere Oasis aghụghọ!
Popular Oasis Hacks na Ndị aghụghọ
Oasis ESP na Wallhack
Ọzọ Oasis Hacks na Ndị aghụghọ
Gamepron raara onwe ya nye iji weta ndị ọrụ anyị Oasis Hacks dị oke egwu na nke kachasị dị na ịntanetị, dịka anyị ga-eji ngwaọrụ ọ bụla ewepụtara. Nke a pụtara na ị ga-enwe ohere irite uru site na Oasis Hacks na Cheats ndị kachasị ewu ewu site na ịzụta igodo ngwaahịa ozugbo na Gamepron. Ma anyị mepụtara ngwaọrụ ma ọ bụ jikọọ gị na otu onye ọkachamara na ndị mmekọ anyị gosipụtara, a ga-enye gị ohere ịnweta Oasis Hacks dị na weebụ. Anyị etinyela Oasis Aimbot ebe a na Gamepron nke na-enye gị ohere ịdabere akụkụ ụfọdụ nke onye iro gị na Ọkpụkpụ Prioritization, ma ọ bụ naanị kpochapụ ha site na iji ngwa ngwa igbu.
Ihe ọzọ dị ịtụnanya nke atụmatụ ị ga-atụle ga-abụ Nkwụnye andkwụ na nhọrọ mmebi dị elu, ha abụọ ga-eme ka nsuso ma gbuo ndị iro gị ikuku. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga n’ihu ma lanarị ogologo oge na Oasis, uru ngwa ọrụ anyị kwesiri ịpụta.
Gha aghaghi ime nke oma mgbe inwetara Oasis Aimbot anyi, ihe oma anyi nwere ike ikwe. Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịghọ onye isi Oasis site na ịnweta aghụghọ anyị, mana ị nwere ike ịme ya n'enweghị nchegbu - ị gaghị anwụ n'oge ọgụ ọzọ mgbe enyere Oasis Aimbot aka. Na Ọkpụkpụ Prioritization na-enye gị ohere ịkọwapụta ebe ịchọrọ gbaa na Auto-Aim / Fire na-elekọta usoro a maka gị, ihe ị ga - eme bụ ịnọdụ ala ma zuru ike. Oasis Aimbot ga-emere gị ọrụ niile, ma ọ bụrụ na nke ahụ adaghị “ọchị”, enwere ọtụtụ nhọrọ enwere ike ịgbanwe nke ga - enye gị ahụmịhe kachasị mma.
Iji Oasis Aimbot anyị ga-ahapụkwa gị ka ị jiri ngwa ngwa ngwa ngwa, nke ga-egbu onye ọ bụla ị na-echebara echiche ozugbo. You gaghịdị enye ha ohere iji chebe onwe ha, nke kachasị mma maka gị - nke a pụtara na ohere ị ga - emeri bụ nke ka elu
Anyị na-enye ezigbo Oasis ESP na Wall Hack ebe a na Gamepron, nke ahụ bụ n'ihi na ịchọrọ inwe nnukwu uru ga-ekwe omume na egwuregwu lanarị nke ụdị a. Ndị na-emegide gị ga-eme ihe niile ha nwere ike ime n’ihu, nke gụnyere iji ngwa Oasis ESP na Wall Hack iji chọpụta ebe ị na-ezo. Alụọ ọgụ na a bara uru Oasis ESP nke gị onwe gị! Nwere ike ịhụ ọkpụkpụ ọkpụkpọ site na mgbidi, mana enwere ọtụtụ nhọrọ ESP (Ngosipụta Mmetụta Ọmụma) ịhọrọ site na nke ọma. Nwere ike ịhụ aha onye na-egwu egwu, yana ahụ ike ha hapụrụ na ọbụnadị anya ha! Iji ihe ESP na nzacha na-enye gị ohere ịkwakọrọ ihe ngwa ngwa, ebe ị nwere ike ịchọpụta ebe ezigbo ihe dị site na iji ngwaọrụ anyị. Enweghị mkpa ịhapụ oge ọ bụla ọzọ na-eburu ihe efu na-abaghị uru, dị ka Oasis ESP ga-egosi gị n'ụzọ ziri ezi.
Akụkụ ọzọ dị ịtụnanya nke ọtụtụ Oasis Hacks anaghị emeju ga-abụ atụmatụ akara ukwu. Nwere ike iji akara Mkpịsị ụkwụ iji soro ndị iro dị gị nso, na-enye gị ohere idina na ndò na iku mgbe oge ruru. Hazi nru ugha na ịtọlite ​​ọnyà ndị siri ike dị mfe mgbe ị nwere akara ụkwụ na-eduga gị na onye iro, nke a ga-ada ụda karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwetaara atụmatụ Njirimara. Notgaghị naanị ndị iro, mana ị ga - ama etu ha si nọrọ n’elu ya! Dị ka aha ga-atụ aro, anyị High Mebiri emebi atụmatụ bụ ezigbo maka ndị na-achọghị ka ọgbaghara gburugburu n'oge a egbe egbe. Ogbugba ọ bụla ị na-ewere ga-adị ike karịa ndị iro gị, n'agbanyeghị ngwa agha ha na-eji.
Can nwere ike igwu ọrụ nke onye na-egbu bonafide na akara ukwu anyị, mbibi dị elu, na atụmatụ enyere aka - yabụ gịnị ka ị na-eche?
E nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ iji tụlee ma a bịa na Oasis Hacks na Cheats, ha niile ga - enyere gị aka ị bụrụ ọkpụkpọ dị mma. Ezie na ndị ọzọ ga-ajụ iji aghụghọ maka onwe ha, ị nwere ike zọda ha na nrubeisi! Site na njirimara niile dị ịtụnanya anyị kwurula ugbu a, a ka nwere ụdị ọrụ 2D Radar na ịdọ aka na ntị iji tụlee - dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, anyị enwetakwala ọnọdụ Super Jump nke ga - enyere gị aka zere mmebi ọdịda (n'agbanyeghị ogo ị na-ada). Chọghị ka ọganihu gị niile ga-efu n'ihi obere mbanye anataghị ikike nke na-anaghị enye mgbochi cheat nchebe ma, nke bụ akụkụ ọzọ dị ugbu a na Gamepron.
Ngwaọrụ anyị niile bụ 100% achọpụtabeghị, nke pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara mmachi iwu gị. Ndị na-agba ọsọ nwere ike ịtụ anya ịnwe mmachi na-adịgide adịgide n'oge ụfọdụ ka ha na-aghọ aghụghọ, mana ọ bụghị ya na Gamepron!
Egwuregwu Oasis ajụjụ
Gịnị mere anyị Oasis Hacks
Mgbe ịzụrụ Oasis Hacks site na Gamepron, ọ bụghị naanị na a ga-enye gị ngwá ọrụ na-enweghị isi, ebe anyị na-elekwasị anya na njirimara nke ọ bụla ntọhapụ. Anyị na-enye ha-arụ ọrụ zuru oke nke ga - enyere gị aka imeri egwuregwu karịa, n'agbanyeghị etu ị nwere nka - ọ bụ ya mere ị ga - eji tinye okwukwe gị na Oasis Hacks! Nke a bụ naanị ọrụ dị yana yana, yabụ mee ihe ngwa ngwa.
Kedu ihe kpatara Oasis Aimbot anyị
Oasis bụ ụdị egwuregwu ga-akwụghachi onye ọrụ ọrụ ụgwọ n'ọtụtụ oge, na-eme ka izi ezi gị bụrụ ihe dị mkpa nke egwuregwu ahụ. Yougaghị agbaghara ogbugba ọzọ mgbe ị nwetara Oasis Aimbot anyị, nke ahụ ga-atụgharị gaa ọtụtụ ihe ịga nke ọma mgbe ị na-egwu egwuregwu ahụ (dịka a ga - asị na nke ahụ apụtaghị) Egbe egbe abụkwaghị nrụgide na-akpata, ebe ị ma na ị ga-emeri.
Kedu ihe kpatara Oasis ESP anyị
Oasis bụ egwuregwu lanarị nke ga-akpọku gị ka ị kwakọrọ ihe n'oge ụfọdụ, nke pụtara na a ga-enwe ọtụtụ "junk" ihe iji tụlee izere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na ngwongwo kachasị mma, ị nwere ike iji Oasis Item ESP anyị na nzacha iji lelee ụlọ tupu oge eruo - na-echekwa gị ọtụtụ oge na usoro ahụ.
Kedu ihe kpatara Oasis Wallhack anyị
Oasis Hacks ga-adị iche na mma, mana ọ bụghị Gamepron. Anyị Oasis Wall mbanye anataghị ikike na-aga egwuregwu otu àgwà dị na ihe niile anyị na ndị ọzọ na Oasis ngwaọrụ, nke pụtara na ị ga-enwe ike ịnọ na egwu ma na ihe bara uru ihe ngwa ngwa. Ahapụla ya na ohere ma jiri Oasis Wall mbanye anataghị ikike iji hụ ihe dị n'akụkụ nke ọzọ!
Kedu ihe kpatara Oasis Norecoil anyị
Mgbasa ọ bụla na-adabere na egwuregwu dị ka Oasis, nke mere na iji Oasis NoRecoil mbanye anataghị ikike ga-arụ ọrụ ebube nye gị. Iji ngwa ọrụ a na - enye gị ohere ịnwe ọgbụgba ziri ezi karịa, nke pụtara na ndị iro agaghị enwe ohere mgbe gị na ha ga - mkpịsị ụkwụ gị. Mgbe ịchọrọ ịmanye ndị mmadụ ime uche gị, njirimara Oasis NoRecoil bụ ụzọ zuru oke iji mee ya.
Etu ibudata ihe kacha mma Oasis hacks?
All nke kacha mma Oasis Hacks nwere ike ibudata ebe a na Gamepron. Ozugbo ị kwụrụ ụgwọ maka igodo ngwaahịa gị, enwere ike iji ya nweta Oasis Hacks anyị (dabere na igodo ngwaahịa ịzụrụ). Nwere ike ịnweta niile nke kacha mma hacks dị ka Oasis Aimbot, ESP, Wall Hack, na NoRecoil iji Gamepron.
Gịnị mere gị Oasis hacks dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ
Igwe bụ oke mgbe ị na-ahọrọ mbanye anataghị ikike na Gamepron, dị ka anyị Oasis Hacks-apụghị adịkwa mgbe ọ na-abịa mma. A na-egosipụta ngwaọrụ anyị niile ma bụrụ 100% achọpụtaghị mgbe eji ya, yabụ, akaụntụ gị niile nwere nchekwa na anyị! Anyị ọrụ na-awa na mmachi ndabere nakwa dị ka e nwere a nlezianya ọnụ ọgụgụ nke ohere mpere maka ọ bụla otu.
Ikwesighi ịtapụ karịa ihe ị nwere ike iri site na iji Gamepron, ebe anyị na-enye igodo ngwaahịa kwa ụbọchị, kwa izu na kwa ọnwa. Egosipụta bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị ebe a, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji achọsi ike ịlaghachikwute anyị maka mkpa Oasis ha niile! Have nwere ohere na-enweghị njedebe maka mbanye anataghị ikike mgbe igodo ngwaahịa gị na-arụ ọrụ, yabụ nweere onwe gị ịbanye anataghị ikike dịka ịchọrọ.
Awesome Oasis Hack atụmatụ